10 Mitambo uye Zvishandiso Mahara kune Yakatemwa Nguva (Ndira 11) | IPhone nhau
10 Mitambo uye kunyorera mahara kwenguva yakati wandei (Ndira 11)
Chokwadi iwe unofarira kuwana mahara emitambo uye kunyorera izvo zvinobhadharwa zvakanyanya seni; Zvakafanana nemushonga, mune yakanakisa pfungwa, nekuti dzimwe nguva hazvina basa kana zvichinyanya kubatsira kana kwatiri, chinhu chakakosha kutora mukana wekupihwa uyezve, tichaona. Zvakanaka, nhasi ndinokuunzira sarudzo yemahara mitambo uye kunyorera kwe iPhone ne iPad.
Usakanganwa kuti zvese izvi zvinopihwa zvandiri kuzokuratidza pazasi ndeizvi Nguva Yakatemwa, zvinoreva kuti ndinogona kungovimbisa chete kuti vari kushanda panguva yekutsikisa ichi posvo, asi isu hatizive kuti vachashanda kwenguva yakareba sei nekuti vanogadzira havazi kuikurukura. Naizvozvo, kana mutambo kana app ichikufadza, mhanyisa iyo, uye gare gare unogona kuyedza kana iwe ukaisiya kana kuibvisa kubva pane chako chishandiso.
1 Pocket Anatomy
2 Stepr - Pedometer & Fitness Tracker
3 Sketchpad Pro: Notepads uye Sketch Mapedhi
4 Chirimwa Vhidhiyo
5 Dudziro 2 yeSafari
6 Mwedzi Mamba
8 Nguva naAlto - Rekodhi, Track & Log Kushanda Maawa
9 TauraFrench 2
10 Rocket Vhidhiyo yeGoogle Cast uye Chromecast kuTV
Pocket Anatomy pamwe ndizvo iyo yakanakisa kunyorera yatinayo nhasi pane yekupa, asi ini handisi kuzozvivaraidza naye nekuti shamwari yedu Ignacio anoitsanangura zvirinani kupfuura ini pano.
Pocket Anatomy inotsanangudza zvakare revo revo yekubata mushandisi nezvidzidzo zvekurapa. Yedu yekupihwa mubairo-izere yakazara anatomical app, yakasarudzika yakagadzirirwa uye ine mapfumbamwe materu e musculoskeletal, neurovascular uye zvemukati zvemukati zvemukati zvemukati, zvine pamusoro pezviuru zana zvemashoko ekudzidza zvinhu.
Mutengo wakajairika we Pocket Anatomy Iyo 14,99 euros zvisinei ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara, kwenguva yakati rebei. Iyo chete yekudzikira ndeyekuti zviri muchirungu chete asi kunyangwe zvakadaro, ndinokukurudzira kuti utore pasi, funga kuti kana ikashandurirwa muchiSpanish mune inotevera inodzokorora, unenge watove nayo.
Stepr ndeye pedometer inowirirana neiyo iPhone 5s zvichienda mberi uye iyo yaunogona kumisikidza zvibodzwa zvitsva zvekuvandudza hutano uye kugwinya. Iyo zvakare ine huwandu hwakazara uye inoshandisa iyo M7 yekufambisa koprocessor saka ichaverenga yega uye yega yega nhanho dzako pasina iwe kuti unetseke nezvazvo.
Mutengo wakajairika we Stepr Iyo 0,99 euros zvakadaro ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara, kwenguva yakaganhurirwa.
Sketchpad Pro: Notepads uye Sketch Mapedhi
Seizvo zita rayo rinoratidzira, isu takatarisana ne zadzisa padhi padhi kune iPhone uye iPad Naiyo yatisingakwanise kutora zvinyorwa zvedu zvese neruoko, asi zvakare kudhirowa. Iyo ine matani ezvirongwa, maficha uye mabasa iwe aunogona ikozvino kuongorora uye kutora mukana mahara.
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 2,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana yemahara, kwenguva pfupi.
Chirimwa Vhidhiyo chishandiso chiri nyore chinokutendera iwe trim mavhidhiyo nekukurumidza uye nyore; sarudza chikamu chaunonyanya kufarira uye cheka chausingade. Iwo mavhidhiyo matsva akachengetwa mune yakavanzika dhairekitori uye iwe unogona kuagovana iwo pa Instagram, Facebook, Youtube, Flickr, Vimeo kana neemail.
Mutengo wakajairika weCrope Vhidhiyo Iyo 2,99 euros zvakadaro ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara, kwenguva yakaganhurirwa.
Chirimwa Vhidhiyo3,49 €
Dudziro 2 yeSafari
Iyi Anoshanda inoshanda se kuwedzera kwe safari muIOS iyo inoshandura uye kuverenga zvinonzwika zvese zviri mukati peji rewebhu.
Mutengo wakajairika we Dudziro 2 yeSafari Iyo 4,99 euros zvakadaro ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara, kwenguva yakaganhurirwa.
Dudziro 2 yeSafari5,49 €
Mutengo wakajairika we Mwedzi Mamba Iyo 0,99 euros zvakadaro ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara, kwenguva yakaganhurirwa.
Mwedzi Mamba1,09 €
Un vhidhiyo rekodhi neakawanda mafirita. Mutengo wakajairika we XVideo Iyo 1,99 euros zvakadaro ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara, kwenguva yakaganhurirwa.
Nguva naAlto - Rekodhi, Track & Log Kushanda Maawa
Mutengo wakajairika we Nguva naAlto Iyo 1,99 euros zvakadaro ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara, kwenguva yakaganhurirwa.
Tevera & Invoice naAlto2,29 €
Mutengo wakajairika we TauraFrench 2 Iyo 4,99 euros zvakadaro ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara, kwenguva yakaganhurirwa.
TauraFrench 2 (14 ChiFrench Chinyorwa-kune-Kutaura)5,49 €
Rocket Vhidhiyo yeGoogle Cast uye Chromecast kuTV
Mutengo wakajairika we Rocket Vhidhiyo Iyo 1,99 euros zvakadaro ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara, kwenguva yakaganhurirwa.
Rocket Vhidhiyo Cast2,29 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » 10 Mitambo uye kunyorera mahara kwenguva yakati wandei (Ndira 11)
Activator, Flipswitch uye FlipControlCenter izvozvi zvave kuwanikwa kune iOS 10 mubeta
Podcast 8x17: Kutanga 2017 netarisiro dzakanaka